जगदम्बाले उडाइरहेछ धुवाँ, कसले रोक्ने यो प्रदूषण ? | Safal Khabar
जगदम्बाले उडाइरहेछ धुवाँ, कसले रोक्ने यो प्रदूषण ?
भाँचियो ‘देशको मेरुदण्ड’– ४
आइतबार, ०४ असोज २०७७, ११ : ५०
काठमाडौँ । बाराको सिमरा र वीरगन्जको पर्सा क्षेत्रमा फलामे छड तथा सिमेन्टका धेरै उद्योग छन् । ती उद्योगमध्ये सिमराको जगदम्बा स्टिल सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । थोत्रा फलाम पगालेर फलामे छड बनाउने जगदम्बा स्टिल उद्योगबाट निस्कने धुवाँले सिमरावासी ठूलो स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा परेका छन् ।
सिमरावासी सुदीप ढकालको घर जगदम्बा स्टिल उद्योगको ठीक अगाडि छ । उनी पेसाले ज्योतिषीय परामर्श दिन्छन् । सुरुमा जगदम्बा स्टिल उद्योग आफ्नो घरको अगाडि आउँदा ज्यादै खुसी थिए उनी । २ दशक अगाडि जगदम्बा स्टिल त्यहाँ स्थापना हुँदा उद्योगको आकार सानो थियो र त्यसले कुनै प्रदूषण पनि गराएको थिएन ।
आफ्नै घर अगाडि उद्योग आएपछि रोजगारी र बजारीकरणको ठूलो सपना देखेका थिए उनले । तर जब जगदम्बाले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउँदै गयो र कवाडी पगालेर फलामे डन्डी बनाउन थाल्यो, त्यसपछि भने सिमराबासीको निद हराम हुन थाल्यो ।
मोहनबहादुर कार्की जगदम्बाको फ्याक्ट्री नजिकै मोबाइल पसल चलाएर बस्छन् । स्थानीय बासिन्दा मोहनका अनुसार जगदम्बाको प्रदूषणको कारण सिमराबासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ । कारखाना वरिपरि रहेको बस्तीका स्थानीयमध्ये दमको रोग नभएको व्यक्ति पाउनै मुस्किल हुने उनी बताउँछन् ।
मोहन भन्छन्, ‘हामीले लुगा धोएरबाहिर सुकायौँ भने भोलिपल्ट त्यो लुगा कालो भइसकेको हुन्छ । कारखानाबाट निस्कने कालो धूलो र धुवाँको कारण न त यस वरिपरि रुखबिरुवा उम्रन सक्छ, न त सागसब्जी नै खान हुने हुन्छ । घरमा रङ लगायो भने दुई साता पनि टिक्न पाउँदैन । जगदम्बाको प्रदूषण यति धेरै छ कि रातको समयमा बाहिर आधाघण्टा बस्यो भने मान्छे पूरै कालो बनाइदिन्छ ।’
जगदम्बाको प्रदूषण बाहिर देखिने प्रदूषण मात्रै छैन । जब जब कवाडी पगाल्न थालिन्छ, त्यसपछि सिमराको आकाश पूरै कालो हुन्छ । कार्बनका कारण स्वास फेर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । बालबच्चामा रुघाखोकी र निमोनियाको समस्या पटकपटक आइरहन्छ ।
जगदम्बाले दिनको समयमा भन्दा रातको समयमा कैयौँ गुणा बढी प्रदूषण गराउने गरेको छ । दिनको समयमा कवाडी पगाल्दा प्रदूषण नियन्त्रण युनिट चलाउने हुँदा कम प्रदूषण हुने भए पनि रातको समयमा जब सिमराबासी निदाउँछन्, तब सुरु हुन्छ जगदम्बाको धन्दा ।
सिमराबासीले पटकपटक जगदम्बा स्टिल उद्योगसँग प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छलफल गरेका छन् । कतिपटक आन्दोलनको तयारी पनि गरेका छन् । राजनीतक दलका स्थानीय कार्याकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि र युवाको समूहले नै सिमराबासीको आन्दोलनलाई मत्थर पारेको धेरैको गुनासो छ । कैयौँ पटक आन्दोलन जब उचाइमा पुग्छ, तब स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु जगदम्बासँग ‘डिल’ गर्न पुग्छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई चन्दा र भत्ता भए पुगिहाल्छ । जनप्रतिनिधिलाई पनि दाना र पानीको व्यवस्था गरिदिने गरेका उनीहरु पनि सिमराबासीको दुःखमा चुपचाप रहेका छन् ।
जगदम्बाकै उद्योग अगाडि घर भएका श्रेष्ठ थरका एक स्थानीय भन्छन्, ‘स्थिति त यति भयावह छ कि अब बाँच्नै नसकिने भइसकियो । तर यस्ता कुरा गर्न पनि डर छ । सबैले साथ दिएर आन्दोलन गरे प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।’
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्री दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा ?
रिठ्ठे दर्जी पुरपक्षका लागी जेल चलान
ओली गिरोहको राज्यकोष माथि लुट, बजेटमै नभएको शीर्षकमा झण्डै आठ अर्ब मागियो
सामाजिक फासीवादको यात्रामा प्रधानमन्त्री ओली
निर्वाचन आयोगवाट बाहिरिए लगत्तै ओलीले किन भेटे राष्ट्रपति ?
रसियाको संसदीय निर्वाचनमा पुटिनको पार्टी बहुमत नजिक
विश्वकर्मा पूजाको बिरोध गरेको भन्दै मधेसमा जल्यो बाबुरामको पुत्ला
साताको पहिलो दिन यस्तो छ सुनचाँदीको बजार भाउ